Umthandazo weSanta Cosme kunye noDamien. ? Iingcwele zonyango.
Umthandazo weSanta cosme kunye noDamien, yayingamawele abantwana bakaTheodata, ababenabanye abathathu. Bazalelwa e-Aegean, kwi-peninsula yase-Arabia, malunga nonyaka ka-260. Kwaye ngunina owabazisa ngokokholo lobuKristu ngendlela yokuba uYesu Krestu abe liziko lobomi babo. Ngenxa yezifundo zabo zonyango kunye nembali yobomi, abantu abaninzi babacela ukuba bangenelele kwizigulo zabo., Umthandazo weSanta cosme kunye noDamien onamandla.
1 Umthandazo weSanta Cosme kunye noDamien - Unamandla
1.1 Umthandazo weSanta cosme kunye noDamien
1.2 Umthandazo weSanta cosme kunye noDamien wothando
Umthandazo weSanta Cosme kunye noDamien - Unamandla
Ekukhuleni kwabo, bafudukela eSyria baya kufundela amayeza kwiziko elikhulu lokufunda ngelo xesha emva koko baphumelela njengogqirha. Kwaye kulapho baqala khona ukuzalisekisa iimfundiso zobuKristu zonina, kuba bona babengabizi ngenxa yeenkonzo abazinike amahlwempu.
Kuhambo njengogqirha, babenakho ukunyanga abaguli babo ngezifundo zesayensi eziqokelelweyo ngexesha loqeqesho lwabo kwaye Umthandazo weSanta cosme kunye noDamien. Ukususela ngoko, imimangaliso emininzi enxulumene nezempilo yenziwa yafunyanwa kubo. Ukongeza, abazalwana basebenzisa eli thuba lokusebenzisa amayeza ukuheha abaguli babo kukholo lobuKristu ngokunyamezela nothando lwabo kwizigulana zabo.
Nangona kunjalo, ukuzala kohambo lwakhe kwaqala ukuphazamiseka xa umlawuli UDiocletian waqala ukutshutshisa onke amaKristu, okwakhokelela ekubanjweni kukaSanta Cosmas noDamien abatyholwa ngobugqwirha kwaye babonakalisa nehlelo elalivaliwe ngumlawuli.
Bathuthunjiswa bagwetywa ngokubulawa ngamatye nangeentolo, kodwa ke xa bephelile ukubulawa kwabo, abona bafa.
Emva kwesi sehlo, umlawuli wayalela ukuba batshiswe kwindawo yembutho, kodwa umlilo awuzange ubatshaye. Baye bagqiba kwelokuba bancame abazalwana kwaye, ngaxeshanye, iingelosi zabasindisa. Ekugqibeleni, umlawuli wayalela ukuba iintloko zabo zinqunyulwe kwaye abazalwana bafa. Kwaye ukusuka apho, abantu abaninzi baqala ukuguqula kwaye unokuchaza okuninzi Amandla okuthandaza kwi-Holy Cosme kunye noDamien.
Umthandazo weSanta cosme kunye noDamien
“I-Holy Cosme kunye ne-Saint Damien, ngenxa kaThixo nommelwane, bachitha ubomi bakho ekunyamekelweni komzimba kunye nokugula kwabagulayo. Usikelele ogqirha noosokhemesti. Fezekisa impilo yomzimba wethu. Yomeleza ubomi bethu. Philisa iingcinga zethu kubo bonke ububi. Ubumsulwa bakhe kunye nokulula kwakhe kunceda bonke abantwana ukuba babe nobubele kakhulu omnye komnye. Benze ukuba bahlale benesazela esicocekileyo. Ngokhuselo lwakho, gcina intliziyo yam ihlala ilula kwaye inyanisekile. Ndisoloko ndiwakhumbula la mazwi kaYesu: ukuba abantwana beza kum, kuba bobabo ubukumkani bamazulu, i-Cosme kunye ne-Damien eNgcwele, basithandazela, kubo bonke abantwana, oogqirha noosokhemesti. Amen.
Umthandazo weSanta cosme kunye noDamien wothando
«Oyintanda weCosme no-Saint Damien,
Egameni likaSomandla. Ndifuna kuwe intsikelelo nothando. Ngamandla okuvuselela kunye nokwenza kwakhona,
Ngamandla okutshabalalisa nayiphi na imiphumo emibi
Ukususela kwixesha langoku nelangoku
Ndithandazela ukulungiswa ngokugqibeleleyo
Okomzimba wam kwaye
(Chaza igama lamalungu osapho lwakho)
Banqwenela ukukhanya kwamawele angcwele
Yiba entliziyweni yam!
Yenza ikhaya lam libe ngcwele
Ukundizisela uxolo, impilo kunye nokuzola.
Othandekayo eSan cosme naseSan Damián,
Gcina i-San cosme kunye neSan Damián,
Ngoku uyayazi Umthandazo weSanta cosme kunye noDamien yonwabele kwaye ufunde kwakhona: